ရှညောသား: အညာက ဟင်းချက်နည်းလေးများ(၂)
ကြောင်လျှာအဖူးနဲ့ အပွင့်(photo from google)
ရေစိမ်ကျပြီးသား ကြောင်လျှာပွင့်ကို ကြော်စားနိုင်သလို၊ တခြားအရွက်များနဲ့ အရည်ဆမ်းစားလေး ချက်ရင်လည်း ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အပွင့်မို့ အခါးဓာတ်ကင်းပါတယ်။ ကြောင်လျှာပွင့် ရေစိမ်ကျကို ကြော်စားတာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ နောက်ပြီး ကျန်သေးတယ်ဗျ။ အပွင့်ကို အခြောက်လှန်းပြီး ရေနွေးဖျော သုပ်စားရင်လည်း ကောင်းတယ်။ အခြောက်လှန်းပြီးသားကို ကြော်စားလို့လည်း ရတယ်။ ဒီနည်းကတော့ နိုင်ငံခြားရောက်မှ သိတဲ့နည်းပါ။ မုံရွာဘက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကြောင်လျှာပွင့်ခြောက်တွေ သယ်လာတာ အများကြီးပဲ။ သူက သုပ်ကျွေးလို့ စပြီးစားဖူးတာပါ။ ကြော်တာကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာက အစိမ်းပဲလွယ်လွယ်ရတာဆိုတော့ အပင်အောက်က ကောက်ပြီး ဆန်ဆေးရည်နဲ့စိမ်လို့ ရတဲ့ရေစိမ်ကျကိုပဲ လုပ်စားကြတာများတယ်လေ။ အဖွားကတော့ ကြောင်လျှာပွင့်တွေများရင် အခြောက်လှန်းပြီး သိမ်းထားတတ်တယ်။ သူလည်း ချက်ပြီးစားတာပါပဲ။ သုပ်စားရမှန်း သိဟန်မတူဘူး။
ကြောင်လျှာပွင့်ရေစိမ်ကျကို ကြော်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်နီလေး တစ်လုံးစ်ီကို ငါးပိအနည်းငယ်၊ ဆားနနွင်းအရောင်တင်တို့နဲ့ ဆီသတ်ပြီးတော့ ကြောင်လျှာပွင့်ရေစိမ်ကျကို ထည့်ပြီးကြော်ပါ။ ဒီမှာလည်း ပုစွန်ခြောက်တို့ဘာတို့ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က တောကချက်နည်းပြောတာဆိုတော့ ပုစွန်ခြောက်မပါပါဘူး။ မရှိလို့နော်(အဟဲ)။ နောက်ပြီးရင် ငရုတ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူလေး ထောင်းပြီးတော့ အုပ်လိုက်။ ကြိုက်တတ်ရင် အပေါ်က ပင်စိမ်းရွက်လေးပါ ထည့်လိုက်အုံးဗျာ။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ စားပြီးရင်း စားချင်နေမယ့် ကြောင်လျှာပွင့်ကြော် ဟင်းတခွက် ရပါပြီ။ အဝေးရောက်နေသူတွေ အိမ်ကို အမြန်လှမ်းမှာပြီး ချက်စားကြည့်နော်။ စားဖူးရင် ဘယ်တော့မှမေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုရင် ပြောပါတယ်။
ဒါကတော့ ကြောင်လျှာသီးအစိမ်းကို အနေတော်လေးတွေ လှီးပြီးတော့ ဆားကို ဆန်ဆေးရည်နဲ့ရေနွေးရော ဖျော်ပြီး ထည့်စိမ်ယုံပါပဲ။ အသီးတွေ ချဉ်သွားပြီဆိုရင် ငံပြာရည်ချက်၊ ငါးပိရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက် စတာတွေနဲ့ တို့စားလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောက်ပန်းတောင်း ဈေးအနောက်ဘက်က ထမင်းဆိုင်တွေမှာ တခါတရံ ကြောင်လျှာချဉ် အတို့လေးတွေ စားရတတ်ပါတယ်။ အခါးအရသာ မပါတော့ပဲ ချဉ်ငံငံလေးနဲ့ အတို့အမြှုပ်လုပ်စားလို့တော့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ မစားဖူးသေးရင် လုပ်ပြီး စားကြည့်ပါလို့ အကြံပြုပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်အပင်အကြောင်း ပြောတိုင်း အရွက်သုပ်စားလို့ရတဲ့ အပင်က ပါပါနေတယ်။ အင်းလေ အပင်ဆိုတာကလည်း အရွက်ပါမှ ဖြစ်တာကိုးနော်။ အခုလည်း ကြောင်လျှာပင်ကနေ အသီးအပွင့် တွေကို ကြော်လှော်စားပြီးတော့ အရွက်ကိုထားခဲ့ပြန်ရင်လည်း မတရားရာ ကျမှာမို့ ကြောင်လျှာရွက်ကိုလည်း သုပ်ပြီး စားကြအုံးစို့။ သုပ်တာကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။ အရွက်ရှိဖို့ပဲ လိုတာ(အဟီး)။ အရွက်နုကိုခူးပြီး ရေနွေးဖျော၊ ကျက်သွားရင် ရေညှစ်ပြီး ကပ်ကြေးနဲ့ကိုက် ဆား၊ဆီ ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးထားတာရယ် နှမ်းလှော်ထောင်း ရယ်ထည့် သုပ်လိုက်ပါ။ ကြောင်လျှာရွက်သုပ်ကတော့ မနက်အစော ထမင်းကြမ်းနဲ့လိုက်ဖက်တယ်။ နေ့လည်နေ့ခင်း ရေနွေးလေးနဲ့ ဆိုလည်း ကောင်းပါတယ်။ နွေရာသီဆိုရင်တော့ ကြောင်လျှာပင်က အရွက်တစ်ရွက်မှ အပင်ပေါ်မှာ မရှိပါဘူး။ မိုးရွာပြီးမှ အရွက်တွေ ဝေနေအောင် ပြန်ထွက်ပါတယ်။
လယ်ပုစွန်ဆိုတော့ မိုးရာသီစပါးစိုက်ချိန်မှာပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ မြို့ကတော့ ဂဏန်းလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တောမှာတော့ ပုစွန်လုံး လို့ပဲခေါ်ကြတယ်။ ချောင်းထဲက ပုစွန်ဆိတ်က အကွေးလေးတွေမို့ ကွဲအောင် ပုစွန်လုံးလို့ ခေါ်တာလို့ပဲ မှတ်လိုက်နော်။ လယ်ပုစွန်က မိုးလည်လောက်မှာ လယ်တွေ ရေ၀င်ရင် တွင်းအောင်းနေတဲ့ ပုစွန်အိုတွေ ထွက်လာပါတယ်။ လယ်ထွန်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ထွန်းရှဉ်းနောက်က လိုက်ကောက်ရင် ပုစွန်တွေ အများကြီးရတယ်။ သူတို့နေတဲ့ လယ်ကွက်ထဲရေ၀င်လို့ လယ်စိုက်ဖို့ ထွန်လိုက်ရင် တွင်းတွေပျက်ကုန်ပြီး အထဲမှာနေတဲ့ ပုစွန်လုံးတွေက ထွန်သွားရာနောက် ပါနေတာပဲ။ ထွန်ကလဲ ရေထဲမွှေနေရတာဆိုတော့ ပုစွန်တွေလဲ ရှောင်လို့ဘယ်ရမတုန်း။ လယ်ထွန်းရင်းနဲ့ ထွန်ရေးကြောင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပုစွန်လုံးကို ကောက်ပြီး ပုဆိုး ခါးပုံစထဲမှာ ထည့်ပြီး ယူလာယုံပဲ။
လယ်စိုက်ပြီးလို့ စပါးပင်တွေ ကြားမှာ တွေ့ရတဲ့ ပုစွန်လုံးကတော့ အသစ်ကလေးတွေပေါ့။ သူတို့ကတော့ အသစ်ပေါက်တာက ကြီးလာကြတာဆိုတော့ တွင်းအောင်း ပုစွန်အိုတွေနဲ့စာရင် စားရတာ နုတာပေါ့။ စပါးပွင့်တဲ့ အချိန်ဆိုရင် လယ်ပုစွန်တွေ ဆူတဲ့အချိန်ပဲ။ ဥတွေ အဆီတွေ ပေါတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီအချိန်က ပုစွန်လုံးကတော့ စားလို့အကောင်းဆုံးပဲ။ ပုစွန်လုံး ရနိုင်တာလေးတွေ သိပြီးတော့ ဟင်းချက်စားတာလေး ပြောပြတော့မယ်နော်။
ပုစွန်လုံးဟင်း(photo from google)
ဟင်းချက်နည်းကလည်းမခက်ပါဘူး။ ပုစွန်လုံး ပေါတဲ့အချိန်ဆိုရင် မန်ကျည်းသီးစိမ်းလည်း ဟင်းချက်စားတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီ။ ရလာတဲ့ ပုစွန်လုံးကို ရေပြောင်အောင်ဆေးပြီး အခွံခွာ အခွံထဲမှာ ပါတဲ့အဆီလေးတွေကို ပုစွန်ညှပ်နဲ့ ခြစ်ပြီး ထည့်လို့ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ မန်ကျည်းသီးကို ညက်အောင်ထောင်းပြီး ဟင်းအိုးထဲမှာထည့် အစောကခွာထားတဲ့ ပုစွန်လုံးကိုလည်း တခါထဲ ထည့်ပြီးရင် ငါးပိ၊ဆား၊ကြက်သွန်၊နနွင်း၊ ဆီ စတာလေးတွေထည့်ပြီး ရေလေးနည်းနည်း နဲ့ အရင်လုံးလိုက်ပေါ့။ လုံးတဲ့ရေခန်းမှ နောက်ထပ်ရေလေးနဲနဲ ထပ်ထည့် အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့်လေးပစ်ထည့်ပြီး ပင်စိမ်းရွက်လေး အုပ်ပြီးတော့ ချလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ပင်စိမ်းနံ့မွှေးမွေးလေးနဲ့ လယ်ပုစွန်လုံးမန်ကျည်းသီးစိမ်း ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီ။ ဟင်းမချက်ချင်ရင်တော့ အခွံခွာပြီးသား ပုစွန်လုံးတွေကို ဒယ်အိုးမှာ ဆီထည့်ပြီး ကြော်စားလို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ လယ်ပုစွန်က နုနုလေးတွေဆိုတော့ ကြာကြာ ကြော်စရာမလိုပါဘူး။ ခဏဆိုရင် ကျက်တာပဲ။ မကြော်ချင်ရင်တော့ အလုံးလိုက် မီးဖုတ်ပြီး မန်ကျည်းသီးစိမ်းနဲ့ ထောင်းစားရင်လည်း အတော်လေး ကောင်းပါတယ်။ ပုစွန်လုံးပါတော့ မန်ကျည်းသီးက ချဉ်သင့်သလောက် မချဉ်တော့ဘူးပေါ့။ ကြုံကြိုက်ရင် စမ်းပြီးတော့ ချက်စားကြည့်နော်။ တောချက်ပေမဲ့ အကြိုက်တွေ့မှာ အာမခံတယ်ဗျာ(ဟဲ…ဟဲ)။
အိုးလိုက်တွေ့လိုမလာခဲ့တယ် ကြည့်ရတာတော့ အချဉ်နဲ့ ချက်ထားသလိုပါပဲ(from google)
မြို့မှာတွေ့ဖူးတဲ့ ပုစွန်လုံးတွေကတော့ အကြီးကြီးတွေနော်။ မွေးမြူရေးကလား ပင်လယ်တို့၊ မြစ်တို့က ရတာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ အကောင်တွေကတော့ တော်တော်ကြီးတယ်။ လယ်ပုစွန်ကတော့ အဲ့လောက်မကြီးပါဘူး။ နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆီက ချောင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ ပုစွန်လုံးကျတော့ လယ်ပုစွန်လုံးလို မဟုတ်ပြန်ဘူး။ အလုံးက နဲနဲပြားတယ်။ နောက်ပြီး မာလည်းအတော်မာတယ်။ စားလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။
ပုစွန်လုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ကြားဖူးတာလေး တခုပြောပြအုံးမယ်။ ရှေးတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဖိုးသူတော် တစ်ယောက် ပုစွန်လုံးစားချင်လို့ပုစွန်လုံးတွေ သွားကောက်လာတာပေါ့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ဆိုတော့ သူများအသက်ကို သတ်ရမှာလည်း ကြောက်နေတယ်။ စားကလည်းစားချင် သတ်လည်းမသတ်ရဲ ဆိုတော့ အခက်တွေ့နေတယ်။ နောက်တော့ အကြံရပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ ရေနွေးဒယ်အိုးတည် အပေါ်က တုတ်ချောင်းလေးတင်ထားလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတုတ်ချောင်းပေါ်ကိုမှ ပုစွန်လုံးလေး တွေကို ဖြတ်ပြီးကူးခိုင်းတယ်တဲ့။ အကောင်ငယ်တာလေးတွေကတော့ ဟိုဘက်ရောက်အောင် မကူးနိုင်တော့ ရေနွေးအိုးထဲ ပြုတ်ကျပြီးသေတာပေါ့။ အကောင်ကြီးတဲ့ ပုစွန်လုံးတွေကျတော့ ဟိုဘက်ကို ရောက်အောင် ကူးနိုင်တယ်။ ဖိုးသူတော်ကလည်း လူလည်ကျတယ်ဗျ ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးနိုင်တဲ့ ပုစွန်လုံးကိုကျတော့ နင်က အကောင်ကြီးတယ် နောက်တစ်ခါ ပြန်ကူးဆိုပြီး နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ကူးခိုင်းတယ်တဲ့။ ဘေးတိုက်ပဲ သွားတတ်တဲ့ ပုစွန်လုံးခမြာ ဒီတုတ်တန်းပေါ်ကနေ ဟိုဘက်ရောက် ကူးဖို့ဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကို အဖွားက ပြောပြောပြလို့ မှတ်မိနေတာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ပုစွန်လုံးကို မဖမ်းရဲဘူး။ ပုစွန်လုံးက အညှပ်တွေကားပြရင် ညှပ်မှာကြောက်လို့ပါ။ သူတစ်ပါး အသက်ဆိုတာကတော့ မသတ်ဘဲ ရှောင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။
ဟော့ဒါကတော့ ပုစွန်လုံးကြော်ကြီးတွေပါ(photo from google)
အစကတော့ သုံးလေးမျိုးလောက် ပြောမယ်စဉ်းစားထားတာ။ အခုတော့ လယ်ပုစွန်နဲ့ ကြောင်လျှာပင် နှစ်မျိုးက တော်တော်လေးများသွားပြီမို့ ကျန်တာလေးတွေကို နောက်မှ ထပ်ပြောတော့မယ် ခင်ညာ။ ရေးနေရင်း ပေါ်ပေါ် လာတော့ အကုန်ပြောပြချင်တာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ စာတွေရှည်နေရင်လည်း နားလည်ပေးပါနော်။ ဗဟုသုတ ရစေချင်တဲ့ စေတနာ အရင်းခံနဲ့ပါ။
ကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကို သိပြီးသည်ဖြစ်စေ၊ မသိရသေးသည်ဖြစ်စေ ဖတ်ပြီးတော့ ဗဟုသုတလေး အနည်းငယ်မျှ ကျန်ရစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ တခြားနည်းလေးများ ရှိရင် ပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့ပါအုံးဗျာ။
စာဖတ်သူရင်ထဲက လာတဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေက ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဖို့ အားအင်တွေပါ။ လေးစားပြီး တန်ဖိုးလည်းထားပါတယ်။
အားလုံးသော ကျွန်တော့် ညီအစ်ကို မောင်နှမတစ်တွေ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, April 23, 2011 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အကိုဆီ လာလည်အုံးမှပဲ....:):):)
ကြောင်လျှာသီးကုိုအဲဒီလိုစားဘူးတယ်။ အညာမှာမမ တာဝန်ကျဘူးတော့ မမက အဲလိုချက်ကျွေးတတ်တယ်။
လာလည်ပါ Angelhlaing ရေ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အညာကို ပြောတာနော် အခုနေရာကတော့ အသီးအနှံတွေက ရှားပါးလွန်းလှတယ်...:P:P:P နာမည်နဲ့လိုက်ပါ့ဗျာ...တကယ်ကို ရှားတယ်။
Iora က အညာဟင်းလေးတွေ စားဖူးတယ်ဆိုတော့ အညာနဲ့ မစိမ်းဘူးပေါ့နော် ၀မ်းသာပါတယ်။ လာပြီးအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
I like all foods from upper Myanmar. Thanks!
အညာဟင်းလေးတွေ ချက်ချက်ကျွေးနေတဲ့ ရွှေညာသားလေးရေ...... အခုလဲ လည်ပင်းမှာ ကြောင်လျှာသီးကြီး ဆွဲလိုက်လို့ လား.....မြင်ယောင်
လယ်ပုဇွန်လုံးလေး နဲ့ မန်ကျီးသီးချက် လေး စားချင်လိုက်တာ
ဟုတ်ပါ့ဗျာ အစ်မ မယုရေ... ဒီကိုလာခါနီးတော့ ရွာကလူတွေက မင်းကြောင်လျှာဖတ်ကြီး လည်ပင်းဆွဲရတော့မှာပေါ့တဲ့...တော်သေးတယ် ဒီမှာ နေ့တိုင်းမဆွဲရလို့... အဲ့ဒါကြီးဆွဲထားရရင် ရွာကလူတွေပြောတာကို သတိရမိရဲ့ဗျာ...ဟား...ဟားးးး
SHWE ZIN U ရေ အညာကိုသာ အလည်လာခဲ့နော် လယ်ပုစွန်လုံးနဲ့မန်ကျည်းသီးစိမ်းဟင်း အ၀ချက်ကျွေးမယ်...:):):)
Zuhra ရေ လာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...နောက်လည်းလာလည်ပါ အညာအစားအစာလေးတွေ ချက်ကျွေးမယ်ဗျ...ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ကြောင်လျာသီး ကိုမြင်ဖူးပေမဲ့တစ်ခါမှ မစားဖူးသေးဖူး..
ဟင်းချက်စားတဲ့နည်းတွေ မှတ်သွားတယ်..